စိတျဖိစီးမှုမြားက ဦးဏှောကျကို ဖိရာဝယျ ? – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
‘လူတဈခု ပူမှုရယျတဲ့ဆယျကုဋေ’ တဲ့။
‘လူဖွဈရတဲ့ ဒုက်ခ’ တဲ့။
လူဖွဈလာရငျတော့ ဖိစီးမှုတှဆေိုတာ မှေးကငျးစကနေ သတေဲ့အထိ ကိုယျရော စိတျပါ ရှိစမွဲ။ ပျေါလာလိုကျ ပြောကျသှားလိုကျ။
နောကျတဈခုပျေါလာလိုကျ ပွနျပြောကျသှားလိုကျ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ပိုကွံ့ခိုငျ သနျမာလာရတာကိုး။
စိတျထောငျးလို့ ကိုယျကွတေတျတယျ။ ဒီလိုပဲ ခန်ဓာကိုယျကွီးကွောငျ့လညျး စိတျက ဖိစီးနရေတတျတယျ။ အပွနျအလှနျပေါ့။
? Stress လို့ချေါတဲ့ ဖိစီးမှုတဈခုဟာ ခဏနဲ့ ပြောကျသှားတဲ့ Acute stress ဆိုရငျတော့ တခါတလေ လူကိုအကြိုးပွုနိုငျပါတယျ။
ဥပမာ အရေးကွီးပွီ နောကျဆုံးအခြိနျရောကျပွီဆိုရငျ ဘယျကရောကျလာမှနျးမသိတဲ့ ခှနျအားတှနေဲ့ တှနျးတှနျးတိုကျတိုကျ အလုပျပွီးသှားတာမြိုးပေါ့။
? ဒါပမေဲ့ ခဏနဲ့ပြောကျမသှားဘဲ အကွာကွီးတညျမွဲနတေဲ့ chronic stress အခွအေနမြေိုးတှေ..
ဥပမာ…မိသားစုဝငျတဈယောကျယောကျဆုံးရှုံးတာမြိုး၊ အလုပျပွုတျတာ၊ ရောဂါတဈခုခုဖွဈတာ၊ လုပျငနျးခှငျပွဿနာ၊ အိမျထောငျရေးအဆငျမပွတော၊ စီးပှားရေးအခကျအခဲ၊ ကွှေးမွီပွဿနာ၊ ပငျစငျယူလိုကျတာ ၊ အိမျထောငျကှဲတာ ၊ ကလေးမှေးတာ ၊ စတာမြိုးတှေ ဖွဈလာရငျတော့ တျောတျောလေး သတိထားရပါမယျ။
အလှယျပွောရရငျတော့ ဗဒေငျဆရာဆီ ပွေးခငျြကွတဲ့ အခွအေနမြေိုးတှပေေါ့။
ဒီအခွအေနမြေိုးမှာ သတိထားဖို့လိုပါတယျ။ ကွောကျဖို့ကောငျးပါတယျ။ သှေးတိုး၊ ဆီးခြို၊ နှလုံးရောဂါ၊ စိတျကရြောဂါ၊ အဝလှနျရောဂါ၊ ဝကျခွံ၊ နှငျးခူ နဲ့ အမြိုးသမီးတှမှော ဓမ်မတာပွဿနာတှေ ဝငျလာတတျပါတယျ။
? အခြိနျကွာကွာ စိတျဖိစီးလာရငျ ဘာလက်ခဏာတှပွေတတျလဲ?
– ခဏခဏ ခေါငျးကိုကျ
– ခဏခဏ ဗိုကျအောငျ့
– ခဏခဏ ခန်ဓာကိုယျ နာကငျြကိုကျခဲ
– ခဏခဏ ဇကျကွောတကျ..မေးရိုးတှတေောငျ့တငျး
– ဝမျးအရမျးခြုပျ ဒါမှမဟုတျရငျ ဝမျးခဏခဏသှား
– အသကျရှူမဝ မောပနျးလှယျ
– သိသိသာသာ ပိနျလာတာ..ဝလာတာ
– အိပျမပြျော..ဒါမှမဟုတျ အရမျးအိပျ
– အရကျ နဲ့ မူးယဈဆေးတှေ ပိုစှဲလာ..ဆေးလိပျပိုသောကျဖွဈ..
စတဲ့ လက်ခဏာမြိုးတှေ သတိထားမိလာရငျ ဆရာဝနျကို ကိုယျ့ရဲ့ စိတျဖိစီးမှုအကွောငျး သခြော ပွောပွဖို့လိုပါတယျ။
? စိတျဖိစီးမှုကို ဘယျလိုဖွရှေငျးမလဲ?
– ဆေးလိပျ အရကျ နှငျ့ ကဖငျးဓာတျ ရှောငျပါ။ သကွားလြှော့ပါ။ Herbal Tea နဲ့ သဈသီးဖြျောရညျတှေ သောကျပါ။ ရမြေားမြားသောကျပါ။ ရဓောတျပွညျ့ဝနပေါစေ။
စိတျတညျငွိမျဖို့အတှကျ စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့ ပိုလြှံနတေဲ့ adrenaline နဲ့ cortisol ဟျောမုနျးတှကေို ပွနျအသုံးခပြေးဖို့လိုပါတယျ။ ကောငျးကောငျးအိပျပြျောစလေို့ ပိုအကြိုးရှိပါမယျ။
– စိတျတညျငွိမျမဲ့ နညျးလမျးတှရှောပါ။
တရားထိုငျတာ၊ ဝငျလထှေကျလေ မှတျတာ၊ တူရိယာ တဈခုခုတီးတာ၊ ဘာသာရပျအသဈတဈခုခုလလေ့ာတာမြိုးတှကေ စိတျကိုတညျငွိမျစပေါတယျ။
– တဈယောကျယောကျဆီမှာ ရငျဖှငျ့ပါ။
ကိုယျ့ကိုနားလညျပေးနိုငျမဲ့ လူမြိုးတော့ ဖွဈဖို့လိုပါတယျ။ စိတျကနျြးမာရေးဆရာဝနျတဈယောကျ ဒါမှမဟုတျ ကြှမျးကငျြတဲ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျသူတဈယောကျ ဒါမှမဟုတျရငျလညျး မိသားစုဝငျ သို့မဟုတျ သူငယျခငျြးတဈယောကျယောကျပေါ့။ ကွိတျမွုံထားတဲ့ ခံစားခကျြတှကေ သိပျအန်တရာယျမြားပါတယျ။
အိပျရေးမဝလေ ဦးဏှောကျမှာ ဖိစီးမှုပိုမြားလေ မှနျမှနျကနျကနျ တညျတညျငွိမျငွိမျ တှေးတောဆုံးဖွတျနိုငျစှမျး မရှိလေ ဖွဈပါတယျ။
– Stress Diary လုပျပါ။
စိတျညဈစရာကွုံတိုငျး စိတျဖိစီးတိုငျး အခြိနျ၊နစှေဲ့၊ပတျဝနျးကငျြအခွအေနေ အသေးစိတျနဲ့တကှ မှတျတမျးတငျထားပါ။ ကိုယျ့ကို ဘာတှကေ ဖိစီးစပွေီး ဘာတှကေ သကျသာစလေဲ ကိုယျ့ကိုယျကို လလေ့ာပါ။
– မနိုငျဝနျ မထမျးပါနှငျ့။
တခြို့အခွအေနတှေနေဲ့ တာဝနျတှကေို ‘ဟငျ့အငျး’ပွောတတျတဲ့ အကငျြ့မှေးပါ။
– နမေကောငျးခြိနျတိုငျး အပွညျ့အဝ အနားယူပါ။
ကိုယျ့ကိုယျကို ညှာတာပါ။ အနားမယူဘဲ အလုပျလုပျနလေို့ ပိုအလုပျဖွဈမဖွဈမသခြောပမေဲ့ အနားယူလိုကျရငျတော့ ပိုမွနျမွနျနကေောငျးပွီး ပိုကောငျးအောငျလုပျနိုငျမှာ သခြောပါတယျ။
ကဲ…အားလုံး..Stress တှနေဲ့ ဝေးကွပါစေ။
မွနျမွနျမပြောကျခဲ့ရငျလညျး ကောငျးကောငျးရငျဆိုငျကြျောဖွတျ အနိုငျယူနိုငျကွပါစေ။
? စိတ်ဖိစီးမှုများက ဦးဏှောက်ကို ဖိရာဝယ် ?
‘လူတစ်ခု ပူမှုရယ်တဲ့ဆယ်ကုဋေ’ တဲ့။
‘လူဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ’ တဲ့။
လူဖြစ်လာရင်တော့ ဖိစီးမှုတွေဆိုတာ မွေးကင်းစကနေ သေတဲ့အထိ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ရှိစမြဲ။ ပေါ်လာလိုက် ပျောက်သွားလိုက်။
နောက်တစ်ခုပေါ်လာလိုက် ပြန်ပျောက်သွားလိုက်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ပိုကြံ့ခိုင် သန်မာလာရတာကိုး။
စိတ်ထောင်းလို့ ကိုယ်ကြေတတ်တယ်။ ဒီလိုပဲ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့်လည်း စိတ်က ဖိစီးနေရတတ်တယ်။ အပြန်အလှန်ပေါ့။
? Stress လို့ခေါ်တဲ့ ဖိစီးမှုတစ်ခုဟာ ခဏနဲ့ ပျောက်သွားတဲ့ Acute stress ဆိုရင်တော့ တခါတလေ လူကိုအကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ အရေးကြီးပြီ နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင် ဘယ်ကရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ ခွန်အားတွေနဲ့ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် အလုပ်ပြီးသွားတာမျိုးပေါ့။
? ဒါပေမဲ့ ခဏနဲ့ပျောက်မသွားဘဲ အကြာကြီးတည်မြဲနေတဲ့ chronic stress အခြေအနေမျိုးတွေ..
ဥပမာ…မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ယောက်ဆုံးရှုံးတာမျိုး၊ အလုပ်ပြုတ်တာ၊ ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်တာ၊ လုပ်ငန်းခွင်ပြဿနာ၊ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတာ၊ စီးပွားရေးအခက်အခဲ၊ ကြွေးမြီပြဿနာ၊ ပင်စင်ယူလိုက်တာ ၊ အိမ်ထောင်ကွဲတာ ၊ ကလေးမွေးတာ ၊ စတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာရင်တော့ တော်တော်လေး သတိထားရပါမယ်။
အလွယ်ပြောရရင်တော့ ဗေဒင်ဆရာဆီ ပြေးချင်ကြတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့။
ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ နှလုံးရောဂါ၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ အဝလွန်ရောဂါ၊ ဝက်ခြံ၊ နှင်းခူ နဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဓမ္မတာပြဿနာတွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။
? အချိန်ကြာကြာ စိတ်ဖိစီးလာရင် ဘာလက္ခဏာတွေပြတတ်လဲ?
– ခဏခဏ ခေါင်းကိုက်
– ခဏခဏ ဗိုက်အောင့်
– ခဏခဏ ခန္ဓာကိုယ် နာကျင်ကိုက်ခဲ
– ခဏခဏ ဇက်ကြောတက်..မေးရိုးတွေတောင့်တင်း
– ဝမ်းအရမ်းချုပ် ဒါမှမဟုတ်ရင် ဝမ်းခဏခဏသွား
– အသက်ရှူမဝ မောပန်းလွယ်
– သိသိသာသာ ပိန်လာတာ..ဝလာတာ
– အိပ်မပျော်..ဒါမှမဟုတ် အရမ်းအိပ်
– အရက် နဲ့ မူးယစ်ဆေးတွေ ပိုစွဲလာ..ဆေးလိပ်ပိုသောက်ဖြစ်..
စတဲ့ လက္ခဏာမျိုးတွေ သတိထားမိလာရင် ဆရာဝန်ကို ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်း သေချာ ပြောပြဖို့လိုပါတယ်။
? စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ?
– ဆေးလိပ် အရက် နှင့် ကဖင်းဓာတ် ရှောင်ပါ။ သကြားလျှော့ပါ။ Herbal Tea နဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်တွေ သောက်ပါ။ ရေများများသောက်ပါ။ ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေပါစေ။
စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ပိုလျှံနေတဲ့ adrenaline နဲ့ cortisol ဟော်မုန်းတွေကို ပြန်အသုံးချပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေလို့ ပိုအကျိုးရှိပါမယ်။
– စိတ်တည်ငြိမ်မဲ့ နည်းလမ်းတွေရှာပါ။
တရားထိုင်တာ၊ ဝင်လေထွက်လေ မှတ်တာ၊ တူရိယာ တစ်ခုခုတီးတာ၊ ဘာသာရပ်အသစ်တစ်ခုခုလေ့လာတာမျိုးတွေက စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေပါတယ်။
– တစ်ယောက်ယောက်ဆီမှာ ရင်ဖွင့်ပါ။
ကိုယ့်ကိုနားလည်ပေးနိုင်မဲ့ လူမျိုးတော့ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သူတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း မိသားစုဝင် သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ပေါ့။ ကြိတ်မြုံထားတဲ့ ခံစားချက်တွေက သိပ်အန္တရာယ်များပါတယ်။
– အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပါ။
အိပ်ရေးမဝလေ ဦးဏှောက်မှာ ဖိစီးမှုပိုများလေ မှန်မှန်ကန်ကန် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် တွေးတောဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း မရှိလေ ဖြစ်ပါတယ်။
– Stress Diary လုပ်ပါ။
စိတ်ညစ်စရာကြုံတိုင်း စိတ်ဖိစီးတိုင်း အချိန်၊နေ့စွဲ၊ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ အသေးစိတ်နဲ့တကွ မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။ ကိုယ့်ကို ဘာတွေက ဖိစီးစေပြီး ဘာတွေက သက်သာစေလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေ့လာပါ။
– မနိုင်ဝန် မထမ်းပါနှင့်။
တချို့အခြေအနေတွေနဲ့ တာဝန်တွေကို ‘ဟင့်အင်း’ပြောတတ်တဲ့ အကျင့်မွေးပါ။
– နေမကောင်းချိန်တိုင်း အပြည့်အဝ အနားယူပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညှာတာပါ။ အနားမယူဘဲ အလုပ်လုပ်နေလို့ ပိုအလုပ်ဖြစ်မဖြစ်မသေချာပေမဲ့ အနားယူလိုက်ရင်တော့ ပိုမြန်မြန်နေကောင်းပြီး ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မှာ သေချာပါတယ်။
ကဲ…အားလုံး..Stress တွေနဲ့ ဝေးကြပါစေ။
မြန်မြန်မပျောက်ခဲ့ရင်လည်း ကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ် အနိုင်ယူနိုင်ကြပါစေ။
သင်ျကွနျလညျပွီး မကျြခှံရောငျလာရငျ ?